22 April – Maalinta caalamiga ee Dhulka Hooyo | Radio Himilo
Home / Maalmaha Caalamiga / 22 April – Maalinta caalamiga ee Dhulka Hooyo
Posted by: Mahad Mohamed April 22, 2019
Himilo FM – Maalinta Caalamiga ah ee Dhulka Hooyo waxaa loogu dabaal-degaa in mid kasta oo inaga tirsan uu xusuusnaado in dhulka iyo hab-nololeedkiisa deegaan ay nolosheenna u yihiin nagaadi iyo nafci.
Waxay sidoo kale garwaaqsataa mas’uuliyaddii shacbi oo la iskugu yeeray sanadkii 1992 shirkii Rio Declaration – in la ilaaliyo xasilloonida, dabeecadda iyo dhulka si loogu guuleysto isku dheeli-tirnaanta ka dhex jirta dhaqaalaha, bulshada iyo daryeelka deegaanku had iyo jeer – hadda iyo mustaqbalkaba uu nooga baahan yahay.
50-kii sano ee lasoo dhaafay, dhulka Soomaalida waxaa ku socday xaaluf ba’an oo dhirta iyo geedaha lagu idleynayo. Intii talada dalku gacanta ugu jirtay xukuumaddii Kacaanka – wallow dhir-jaristu socotay, haddana waxaa xusid mudan waqtigaasi inuu ahaa kii ugu fiicnaa ee soo mara nolosha geedaha iyo dhirta. Tani waxay ku timid iyada oo xukuumaddii waagaas ay jideysay mashruuc dhir-beeris ah; iyo mamnuucista dhoofinta dhuxusha.
Maanta labadaasba, waxay ka baxeen daaqadda. Ka ganacsiga dhuxushu wuxuu gaaray heerkii ugu sarreeyey taariikhdeenna casriga ah. Mana jirto ol’ole dhir-beeris ah oo ugu yaraan sanadle ah oo looga hortagayo carra-guurka iyo dhibaatooyinka kale ee deegaanka ku foolan.
In kasta oo aan laheyn tira-koob sax ah oo lagu ogaaday geedaha ku nool dhulkeenna, haddana waxaan hubanti u baahneyn ayaa ah in sanad kasta kumaan kun geedo ah loo jaro in la shito ama dhuxul ahaan looga ganacsado.
Adeegsiga adag ee korontada oo qof kasta uusan awoodi karin waxaa dhacda inay qeyb ku yeelato ku-tiirsanaanta xad-dhaafka ah ee dhuxusha. Hayeeshe marna manoqon karto cudur-daar in dhuxushu noqoto il kamid ah ilaha waaweyn oo ganacsatada qaar ay lacag badan ka sameeyaan.
Helidda ol’ole dhir beeris ah oo ugu yaraan sanadle ah, waxay yareyn kartaa dhibaatooyinka dhulka hooyo ee jira. Waxayna abuuri kartaa fursado nololeed iyo shaqooyin ay ka faa’iidaan da’yar badan. Taasina waxay ku xaqiiqoobi kartaa gacan dowladeed ugu horreyn ama mid samafal oo gudaha ah.
Previous: Sawirro: Gabadha loo saaray taajka quruxda carabta 2019
Next: Central Library Mogdishu University
01 Maarso – Maalinka caalamiga ah ee u dulqaadasho la’aanta takoorka
New Zealand: Shimbir la raadinayo ciddii lahayd!